“လမ်းခွဲ ကလေး နှစ် ခု “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “လမ်းခွဲ ကလေး နှစ် ခု “
“လမ်းခွဲ ကလေး နှစ် ခု “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Feb 27, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 24 comments
ကိုေ ပါက် လက် ဆောင် အ တွေး ပါး ပါးလေး
မ နေ့ ည နေ ထ မင်း စား ပြီး တော့ ဖေစ့် ဘုတ် ကို ၀င် ကြည့် နေ တုန်း အိမ် ရှေ့ ကခေါ် သံ ကြား လို့
ကြည့် လိုက် တော့ ဟို အ ရင် က ကျ နော် တို့ ရုံး မှာ အ လုပ် လုပ် သွား တဲ့ က လေးမ လေး ဖြစ် နေပါ တယ်။
“ဖိတ် စာ လာ ပေး တာ လေး ပေါက်”
“ အော် ညည်း စွံ ပြီ ပေါ့ “ လို့ ကျ နော် က ပြော တော့ သူ က ရီ ကျဲ ကျဲ လုပ် နေ ပါ တယ်။
“ဥ ပုဒ် နေ့ ဆို တော့ လေး ပေါက် လဲ အား တယ် မ လား
လာ ဖြစ် အောင် လာ နော်”
လို့ ပြော တော့ ခေါင်း ငြိတ် ပြ လိုက် ပါတယ်။
“သ မီး သွား အုံး မယ် ဖိတ်စာေ တွ ဝေ ရ အုံး မှာ “လို့ ပြော ပြီး သူ လဲ ပြ န်သွား ပါ တယ်။
ဖိတ် စာ လေး ကို ဖတ် ကြည့် ရင်း
“ သူ လဲ ဘ ၀ လမ်း ခွဲ တစ် ခု ကို ရောက်သွား ပြန်ပေါ့ “ လို့ တွေး မိ ပါ တယ်။
ကျ နော် အ မြင် က တော့ လူ့ ဘ၀ မှာ အ ကြီး မား ဆုံး သော လမ်း ခွဲ နှစ် ခု ရှိ တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။
ပ ထ မ တစ် ခု က တော့ အ ထက် တန်း ကျောင်း သား ဘ ၀ လွန် မြောက် ချိန် ရယ်
လူ ပျို အ ပျို ဘ ၀ ကို စွန့် လွှတ် ပြီး မိ ဘ ရင် ခွင် က နေ ခွဲ ထွက် လို့ အိမ် ထောင် ပြု ချိန် ရယ် ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျ နော် တို့ ငယ် စဉ် ဘ ၀ မှာ မူ ကြို ဆို တာ က နေ စ ပြီး ကျောင်း ဆို တာ နဲ့ ဆုံ ကြ ရ တာ ပါ ဘဲ။
အဲ ဒီ မှာ ရွယ်တူ သူ ငယ် ချင်း တွေ နဲ့ စ တင် ပေါင်း ဖက် ရ တဲ့ အ ချိန် လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ မူ ကြို က နေ မူ လ တန်း အလယ် တန်း အ ထက် တန်း အ ဆင့် ဆင့် တ ဖြည်း ဖြည်း တိုး သွား ရင်း က
ကျ နော် တို့ လည်း အ သက် အရွယ် တွေ ကြီး လာ သ လို အ တွေး အ ခေါ် တွေ လဲ ပြောင်း လဲ လာ ခဲ့ကြ တာ အမှန် ပါ ဘဲ။
ဒါ ပေ မယ့်  လဲ ငယ် သူ ငယ် ချင်း ဆို တဲ့ မူ လ တန်း အလယ် တန်း ဘ၀ များ မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ် ယောက် ဘာ မှ ကွာ ခြား ချက် မ ရှိ သ လို ပါ ဘဲ။
အိမ် က နေ ကျောင်း ကို ကိုယ် ပိုင် ကား နဲ့ ဘဲ လာ လာ ၊
ဆိုင် ကယ် နဲ့ ဘဲ လာ လာ၊
စက်ဘီး နဲ့ ဘဲ လာလာ ၊
လိုင်း ကား ဘဲ စီး ပြီး လာ လာ၊
လမ်း လျောက် ပြီး ဘဲ လာ လာ ၊
ကျောင်း ခန်း ထဲ ရောက် သွား တာ နဲ့ အ တူ တူ ဖြစ်သွား ပါတယ်။
ဖြူ စင် ရိုး သား တဲ့ ဘာ အ ရောင် မှ မ စွန်း ထင်း သေး တဲ့ အရွယ် ကိုး။
အ လယ် တန်း လွန် မြောက် တဲ့ အ ချိန် မှာ တော့ ငယ် သူ ငယ် ချင်း ပေ မယ့် ဘ၀ ရဲ့ ခြား နားချက် လေး တွေက စ တင် လို့ လာ ပါ ပြီ။
လူ က လဲ နည်း နည်း သိ တတ် စ အ ရွယ် ရောက် လာ တော့ ပါတ် ၀န်း ကျင် ကို ချိန် ထိုး ကြည့် တတ် တဲ့ အရွယ် ကို လဲ ရောက် လို့ လာ ပါတယ်။
မင်း အ ဖေ က ဘာ ငါ့ အဖေ က ဘာ
ငါ့  အိမ်က ဘယ် လို မင်း အိမ် က ဘယ် လို ဆို တဲ့ယှဉ် ပြိုင် မူ့ လေး တွေ က တစ် ယောက်နဲ့တစ် ယောက် ကြား မှာ ကိန်း အောင် လို့ လာ တဲ့ အ ရွယ် ကို ရောက် လာ တာကိုး။
ဖြူ စင် ခြင်း မှာ အရောင် နု နု လေး စ တင် အ ပက် ခံ လိုက် ရ တဲ့ ကာ လ လို့ ဆို ချင် ပါ တယ်။
အ လယ် တန်း ရောက် ချိန် မှာ စာ မေး ပွဲ တ ဖုန်း ဖုန်း ကျ လို့ ပ ညာ ဆက် မ သင် တဲ့သူ ရှိ လာ သ လို
အ လုပ် လုပ် နိုင် တဲ့ အရွယ် ရောက် လို့ မိ သား စု အ ခြေ အ နေ အ ရ ကျောင်း ထွက် လိုက် ရ သူ တွေလဲ ရှိ လာ ပြန် သ လို
ပ ညာ သင် တာ အ ချိန် ကုန် တယ် ဆို တဲ့ အ တွေး နဲ့ ကျောင်း က ထွက် ပြီး စီး ပွား ရေးလော က ထဲ ကို ၀င် သွား သူ တွေ လဲ ရှိ ပါ တယ်။
လူ ငယ် ဘ ၀ ကို အ ပြောင်း အ လဲ ဖြစ်စေ တဲ့ ပြန်လည် ပြင် ဆင် လို့ မ ရ နိုင် တဲ့ ပ ထ မ ဆုံး လမ်း ခွဲ က တော့ အ ထက် တန်း ကျောင်း သား ဘ ၀ က နေ တ က္က သိုလ် ကျောင်း သား ကို ကူး ပြောင်း ချိန် ပါ ဘဲ။
ကျ နော် တို့ မြန် မာ နိုင်ငံ မှာ က ဆယ် တန်း အောင် မှတ် အ ပေါ် မှာ မူ တည် ပြီး တ က္ကသိုလ် ၀င် ခွင့် ကို သတ် မှတ် တဲ့ အ တွက် လူ ငယ် တစ် ယောက် အဘို့ ကိုယ် ၀ါ သ နာ ပါ ရာကို ရွေး ချယ် ခွင့် မရှိ ပါ ဘူး။
အ သက် မွေး ၀မ်း ကျောင်း တ က္က သိုလ် လို့ သတ် မှတ် ထား တဲ့
ဆ ရာ ၀န်လိုင်း အင် ဂျင် နီယာ လိုင်း တွေ က အ မှတ် အများ ကြီး ရ သူ တွေ သာ ၀င် ခွင့် ရှိ ပြီး အ မှတ် နည်း သူ တွေ က တော့ သာ မန် ဘာ သာရပ် တွေ ကို သာ သင် ခွင့်  ရှိ ပါ တယ်။
၁၉၇၀ ပါတ် ၀န်း ကျင် က ဆို ရင် ၈တန်း မှာ က တည်း က သိပ္ပံ ၀ိဇ္ဇာ ခွဲ လိုက်
တဲ့ အတွက် ဘ ၀ လမ်း ခွဲ က အ လယ် တန်း က နေ အ ထက် တန်း အ ကူး မှာ
စ တင် သ လို ဖြစ်ခဲ့ ဘူး ပါ တယ်။
၀ိဇ္ဇာ လိုင်း ကို ရော က် သူ က အ များ မက် မော တဲ့
ဆရာဝန် လိုင်း တို့ အင် ဂျင် နီ ယာ လိုင်း တို့ တက် ခွင့် မ ရ
ဘဲ သိ ပ္ပွံ လိုင်း ရောက် သူ သာ တက် ခွင့် ရ တာကိုး။
အဲ ဒီ အ ချိန် တွေ မြန် မာ ပြည် မှာ ဆ ရာ ၀န် ရယ် အင် ဂျင် နီ ယာ က သာ
အ စိုး ရ အ လုပ် ရ ဘို့ နီး စပ် ပြီး အ ပြ င် မှာ လဲ လုပ် ကိုင် စား နိုင် တဲ့
အ တတ် ပ ညာ ရှင် တွေ ဖြစ် လာ တာ ကိုး။
နောက် အဲ ဒီ ခေတ် က ၀ိဇ္ဇာ လိုင်း ရောက် သွား ရင် ဆယ် တန်း အောင် ဘိုို့
အ တော် လေး ခက် ခဲ ပါ တယ်။
ဒီ တော့ လဲ အ များ စိတ် ၀င် စား မူ့ နည်း ပါးတဲ့ ဘာ သာ ရပ် ဖြစ် သွား တဲ့ အ တွက် အ လို လို နေ ရ င်းနိ မ့် ပါး သွား သ လို ပါ ဘဲ။
ဆယ် တန်း ဆို တဲ့ ကာ လ လွန် မြောက် တာ နဲ့ ဆယ် တန်း အောင် သူ နဲ့
မ အောင် သူ ဆို တဲ့ ခြား နက် ချက် က စ တင် လို့ လာ ပါ တယ်။
ဆယ် တန်း မ အောင် သူ က ဘွဲ့ မရ နိုင် တော့ တဲ့ အ တွက် အ စိုး ရ ဌာန
များ မှာ အ လုပ် ၀င် လုပ် မယ် ဆို ရင်သာမန် စာ ရေး အဆင့်
အလွန် ဆုံး ဖြစ် လာ နိုင် ရင် ဌာန ခွဲ စာ ရေး ကြီး အ ဆင့် လောက် ပေါ့။
ပြန် တန်း ၀င် အ ရာ ရှိ မ ဖြစ်နိုင် တော့ ပါဘူး။
ဆယ် တန်း အောင် ပေ မယ့် လဲ အ သက် မွေး ၀မ်း ကျောင်း တက္ကသိုလ်ကို
ရောက် သွား သူ တွေ သာ ကိုယ် သင် ကြား ခဲ့ တဲ့ ဘာ သာ ရပ် ကိုက်ညီ တဲ့
အ လုပ်အကိုင် ကို ရ နိုင် ပြီး ပြန်တန်း ၀င် အ ရာ ရှိ ဘ ၀ ကို ရောက် နိုင်
သာ မန် ၀ိဇ္ဇာသိပ္ပံ ဘွဲ့ ရ တွေ က တော့ ဘယ် ဘာသာ ရပ် နဲ့ ဘဲ ဘွဲ့ရ ခဲ့ ရ ခဲ့
အ စိုး ရ အ လုပ် ဖြစ်ဖြစ် အ ပြင် ပု ဂ္ဂ လိ က အ လုပ် ဖြစ် ဖြစ် ရ တဲ့ နေ ရာ
၀င် လုပ် ကြ ရ ပါ တယ်။
ဒီ တော့ ဆယ် တန်း ဆို တဲ့ ကာ လ ကို လွန် မြောက် သွား တဲ့ အ ချိန် က စ ပြီး
ငယ် သူ ငယ် ချင်း ဆို တဲ့ ဘ ၀ လေး ကုန် ဆုံး ပြီး မ တူ ခြား နား တဲ့ ဘ၀ တွေနဲ့
လော က ကြီး ထဲ ကို စတင် ၀င် ရောက် ရ ပါ တော့ တယ်။
ဒီ တော့ လူ ငယ် ဘ ၀ အ တွက် ပ ထ မ ဆုံး သော အကြီး မားဆုံး သော လမ်း ခွဲ စ တင် ချိ န် ဖြစ် ပါ တယ်။
အဲ ဒီ လမ်း ခွဲ ချိန် က နေ စ ပြီး တစ် ယောက် နဲ့ တစ် ယောက် ဘ ၀ တွေ က လဲ အ မျိုး မျိုး ပြောင်း လဲ သွား ကြ ပါ တယ်။
အ ချို့ က တော့ အ စိုး ရ အ လုပ် ၀င် လုပ် မယ်။
အချို့ က တော့ ပုဂ္ဂလိ က အ လုပ် ၀င် လုပ် မယ်။
အချို့ က တော့ မိ ဘ လက် ငုတ် လက် ရင်း အ လုပ် ၀င် လုပ် မယ်။
အချို့ က တော့ ကိုယ် ပိုင် လုပ် ငန်း ကို ကိုယ့် အစွမ်း အ စနဲ့ ထူ ထောင် မယ်။
အ ချို့ က တော့ ပွဲ စား လုပ်မယ်။
အ ချို့ က တော့ ကိုယ် ၀ါသ နာ ပါ ရာ အ နု ပ ညာ လုပ် ငန်း နဲ့ အသက် မွေး မယ်။
အဲ အ ချို့  ကတော့ ဘာ အ လုပ် မှ မ လုပ် ဘဲနေ မယ်။
ကိုယ် သင် ယူ ခဲ့ တဲ့ အတတ် ပညာ ကို အကြောင်းပြု ပြီး လုပ် ကိုင် စား သောက် ပုံ တွေ မ တူ ညီ ကြ သ လို ဆင်း ရဲ ချမ်း သာ ဆို တဲ့ ဘ ၀ တွေ့ ဖြစ် လာ ခဲ့ ကြ ပါတယ်။
ကျ နော် တို့ လူ သား ရယ် လို့ ဖြစ် လာ ရင် မ ကင်း နိုင် တာ တော့ အ ချစ် နဲ့ တပ် မက် ခြင်း ပါ ။
အ ချစ် နဲ့ တပ် မက် ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် ပေါ် လာ တဲ့ စ်ိတ် က တော့
တစ် ဦး တည်း ပိုင် ဆိုင် လို စိတ် ပါ ဘဲ။
ပိုင် ဆိုင် လို စိတ် ရှိ တဲ့ အ တွက် လဲ ပေါင်း သင်းလက် ထပ် ခြင်း ဆို တာ ဖြစ်
လာ ခဲ့ ကြ ပါ တယ်။
တ ကယ် တော့ လူ သား နှစ်ဦး ပေါင်း သင်း လက် ထပ် ခြင်း ဆို တာ ထက်
မိ သားစု ကြီး နှစ် စု ပေါင်း လိုက် တာ ဖြ စ် ပါ တယ်။
ဒီ လို မိ သား စု နှစ် စု ပေါင်း တယ် ဆို တာ က လဲ လွယ် ကူ တဲ့ ကိ စ္စ တော့ မဟုတ် ပါဘူး။
မိ သား စု တစ် ခု မှာ မိ သား စု ၀င် လူ ပေါင်း များ စွာ ပါ ၀င် နေ တယ် ဆို တော့
လဲ မ တူ ညီ မူ့  တွေ အ များကြီး ရှိ နိုင် ပါတယ်။
မ တူ ညီ ခြင်း က နေ ပြဿနာ ဆို တာ တွေ ကို သယ် ဆောင် လာ တာ ပါ ဘဲ။
တစ် ခါ တစ် ခါ မှာ ဒီ ဆွေ မျိုး အသိုင်း အ၀ိုင်းေ တွ ကြောင့် ဘဲ အိမ် ထောင် ရေး ပြို ကွဲ ရ တာ မျိုး ရှိ နိုင် ပြန်သလို အိမ် ထောင်ေ တာ့ ပြို ကွဲ မသွား ပေ မယ့် လဲ
ဘ၀ ကို စိတ် ဆင်း ရဲ စွာ ကုန် ဆုံး ရ တာ မျိုး လဲ ရှိ နိုင် ပါ တယ်။
တစ် ခါ ကေ တာ့ ကျေ နာ် မိတ်ဆွေ ကြုံ ခဲ့ ရ တဲ့ မိသား စု ခြင်း အ နေ အထိုင် မ တူ ညီ တဲ့့ပြဿနာ ကို ကြုံ ခဲ့ ရ တာလေးကိုတာ လေး ကို ပြန် ပြော ပြ ချင် ပါ သေး တယ်။
သူ့ သား က ရန် ကုန် မှာ သွား အ လုပ် လုပ် နေ တာ ပါ။
အဲ လို နေ ရင်း တစ် မြို့ ထဲ သား ခြင်း အ ဝေး မှာ အ လုပ် အ တူ လုပ် တဲ့ ကောင် မ လေး နဲ့ လူ ငယ် ချင်း ကြိုက် ကြ တော့ တောင်း ပေး ရ တော့ တာ ပေါ့။
ကျ နော့်  သူ ငယ် ချင်း မိ သား စု က ဟိုး ဘိုး ဘေး ဘီ ဘင် လက် ထက် က တည်း က ကြွယ် ၀ ချမ်း သာ သူ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒါ ပေ မယ့် ရှိ တာ လဲ လူ မ သိ၊
မ ရှိ တာ လဲ လူ မ သိ ခပ် အေး အေး နဲ့
ရိုးရိုး ကုပ် ကုပ် နေ တတ် သူ ဖြစ် ပါ တယ်။
ကောင် မ လေး အိမ် ကို သွား ပြီး မြန်း တဲ့ နေ့ ကတဲ့ က စိတ် မ တိုက်ဆိုင်စရာ
တွေ တွေ့ လာ ခဲ့ ရ ပါ သ တဲ့။
မ င်္ဂ လာ ဆောင် ကိစ္စ အ တွက် ပါ တစ် ခါ ထည်း တိုင် ပင် ကြ တဲ့ အချိန်မှာ
ကျ နော့်  သူ ငယ် ချင်း က တော့ မ င်္ဂ လာ စား ရိတ် ကို အ များ ကြီး မသုံးဘဲ
က လေး တွေ ရင်း နှီး စား နိုင် အောင် ပေး လိုက် ချင် တယ်။
မ လို တာ တွေ သိပ် ချဲ့ ကား မ နေ ချင် ဘူး။
အဲ ဒီ အချိန် မှာ မိန်း ကေ လး ဘက် က တစ် သက် မှာ တစ် ခါ တို့
ဟင်း ရွက် ကန် စွန်း မဟုတ် ဘူး တို့ အ ပေါ စား စ ကား တွေ နဲ့ တုန့် ပြန် လာ ပါ တယ်။
မ င်္ဂ လာေ ဆာင် မှာ ၀တ် မယ့် အ၀တ် အစား ကို လဲ ဈေး ကြီး တဲ့ ချိတ် လုံ ချည် ကို သူ တို့ ဆွေ မျိုး တွေ ကို လည်း ဆင် တူ ၀ယ်ေ ပး ရ မယ် ဆို ပြန် ပါ တယ်။
နောက် ဆုံး တော့ ယော ကျာ်း လေး ရှင် လဲ ဖြစ် တတ် လဲ တတ် နိင် တော့
လိုက် လျော ပြီး လုပ် ပေး လိုက် ရ ပါ တယ်။
စိတ် ပျက် စ ရာ ကောင်း တာ က တော့ မင်္ဂ လာ ကိစ္စ ပြော ကြ တဲ့ မနက်
ခင်း မှာဘဲ ခမီး ခမက် တော် ရ မယ့် သူ ဆီ က အ ရက်နံ့ ရ နေ တာ ပါ ဘဲ။
နောက် မှ သိ ရ တာ က သူ တို့ တွေ က ချဲ နဲ့ ဘော လုံး ပွဲ ဒိုင်ခံ တဲ့ အ လုပ်
ကို လုပ် နေ ကြ တယ် ဆို တာ ပါ ဘဲ။
ရိုး သားေ အး ချမ်း စွာ နေ သူ နဲ့ သွက် လက် တက် ကြွ စွာနေသူ ကြား
မှာ ခြားနား ချက်တွေ ရှိ ကြ တာ အ မှန် ပါ ဘဲ။
မ င်္ဂ ဆောင် မ တိုင် ခင် မှာ လဲ ဟို ဟာ လို တယ် ဒီ ဟာ လို တယ် နဲ့
တောင်း ဆို ချက် တွေ က မ ပြီး နိုင် မ စီး နိုင် လို အပ် ချက် တွေ နဲ့ အတူ
“သား ရှင် ဘဲ လုပ် ပေး ရ မှာ ပေါ့ “ ဆို တဲ့ စ ကား က နောက် က ပ် ပါ လာ ပါ တယ်။
စ ကား လဲ မ များ ချင် တော့ လုပ် ပေး လိုက် ပါတယ်။
ပို စိတ် ပျက် စ ရာ ကောင်း တာ က တော့ မ င်္ဂ လာ ဆောင် ပြီး တဲ့ ည က
ထ မင်း စား ပွဲ လုပ် ချိန် မှာ ပါ။
ကိုယ် ပိုက် ဆံ မ ကုန် ရ တိုင်း အ ရက် အကောင်း စားေ တွ နဲ့ ဧည့် ခံ ကြ။
ဘီ ယာ တွေ တ စ် ဖာ ပြီးတစ် ဖာ ဖောက် သောက် ၊
စား ကြ သောက်ြ က မူး ကြ ရူး ကြ နဲ့သ ရုပ် ပျက် လွန်း ပါ တယ်။
သူ တို့ လဲ မင်္ဂ လာဆောင် ပြီး တဲ့ နေ့  က စ ပြီး ခ မီး ခ မက်သာ ဆို ပေ မယ့်
ပတ် သက် မူ့ မရှိ တော့ ပါ ဘူး တဲ့။
အဲ လို ခပ် တန်း တန်း နေ ပြန် တော့ လဲ ငွေ မ ရှိ လို့ နှိမ် တယ် ဆို တဲ့
တုန့် ပြန် သံ လေး တွေ က ထွက် လာ ပြန် သ တဲ့။
နောက်တစ် ယောက် ကြုံ ရ တာ တစ်မျိုး ။
က လေး မ လေး က အိမ် ထောင် ကျ တော့ ကောင် လေး အိမ် လိုက် နေ ရ တာ ပေါ့။
ကောင် မ လေး က ငယ် ငယ် ကတည်း က သေ သေ ၀ပ် ၀ပ် နဲ့ နေ တတ် သူ။
မ နက် မိုး လင်း အိပ် ယာ ထ တာ နဲ့ မျက် နှာ သစ် ဆံ ပင် သပ် သပ် ရပ် ရပ် ထုံးဖွဲ့။
မျက် နှာ ကို သ နပ် ခါး လိမ်း ဘု ရား ရှိ ခိုး။
အိမ် အ လုပ် တွေ လုပ်။
အ ပြင် က ပြန် လာ တယ် ဆို ရင် လဲ အိမ် နေ ရင်း ၀တ် တဲ့ အ ၀တ် အ စား နဲ့ လဲ။
ချွေး စို တဲ့ အ၀တ် လွှား ထား။
ည အိပ်တော့ လဲ အ၀တ် အစား နွမ်း နွှမ်း သန့် သန့် ပြန့် ပြန့် လေး ၀တ် ပြီး အိပ်။
နောက် ကိုယ့် အ၀တ် အ စား ကို သေ ချာ သိမ်း ။
သူ များအ ၀တ် အစား ငှား ၀တ် တယ် ဆို တာ မ ရှိ။
သူ့ ယောင်း မ တွေ က တော့ သူ နဲ့ ပြောင်း ပြန်။
အိပ် ယာ လဲထ ချင် တဲ့ အ ချိန် ထ။
အိပ်ယာ ထ ပြန်ရင် လဲ မျက် နှာ ကို ရေ လေး ဆွတ် ပြီး ဆံ ပင် စုတ် ဖွားနဲ့
မ နက် စာ စား လို့ စား။
အ ၀တ် အ စား ၀တ်တာ လဲ စည်း မရှိ ကမ်း မ ရှိ။
သွား စ ရာ လာ စ ရာ ရှိ ပြီ ဆို မှ
“ ယောင်း မ ရေ ….” ဆို ပြီး အ ၀တ် တွေ လာ ငှား လာယူ ပြီး ၀တ် လို့ ၀တ် နဲ့။
အ တော် လေး ကို စိတ် ညစ် ရ ပါ သ တဲ့။
မ ငှား ပြန်ဘူး ဆို ရင် လဲ သူ တို့  စိတ် ဆိုး မှာ စိုး ရ ။
အိမ် ခွဲ ဆင်း ရ အောင် ဆို ပြန်တော့ လဲ ယောကျာ်း က အ မေ နဲ့ မခွဲ နိုင် ။
ဒီ တော့ လဲ ကျိတ် မှိတ်သည်းခံ နေ ရ တော့ တာ ပေါ့ ။
အဲ လို သည်း ညည်း မ ခံ နိုင် သူ များ က တော့ လ င် မယား ကွဲ ကြ ပြဲကြ။
ဒါ က တော့ နှစ် ဖက် အသိုင်း အ ၀ိုင်း မ တူ ညီ လို့ ဖြစ် လာ တာ မျိုး ပါ။
အချို့  အိပ်ထောင် ဖက် ကြ ပြန်တော့ လဲ ယောကျာ်း ကကောင်း ပေ မယ့်
မိန်း မ က ဆိုးလို့ အ ဆင် မ ပြေ သူတွေ လဲ ရှိ နိုင် ပြန်ပါ တယ်။
အိမ် မူ့ ကိစ္စ ကို နိုင် လဲ မနိုင် လုပ် လဲ မ လုပ်ချင် တဲ့ မိန်းမ၊
ထ မင်း ဟင်း မ ချက် ချင် တဲ့ မိန်း မ၊
ပေါင်း သင်း ဆက် ဆံ ရေး ဆိုး တဲ့ မိန်း မ၊
သူ့ ဆွေ မျိုး အသိုင်း အ၀ိုင်း ကို ဘဲ ပေး ကမ်း ချင် တဲ့ မိန်းမ၊
စည်း မဲ့ ကမ်း မဲ့ နေ ချင် သလို နေ တဲ့ မိန်းမ ၊
ယေကျာ်းကို သ ၀န် တို လွန်း သော မိန်း မ၊
ယောက်ျား က ဘယ်ေ လာက် ရှာ ရှာ ကျေ နပ် တင်း တိမ် နိုင်ခြင်း မ ရှိ တဲ့ မိန်း မ၊
ယောက်ျား ကို အနိုင် ယူ ချင် စိတ် ကောက်ချင် တဲ့ မိန်း မ၊
အမြဲ မြည် တွန် တောက် တီး ပြီး အာ ပူ နေ တဲ့ မိန်း မ၊
တွေ နဲ့ ဆုံ နိုင် ပြန်သလို
မိန်း မ က ကောင်း ပြန်တော့ လဲ
ဆေး လိပ် အရက် လောင်း က စားမိန်း မ တစ်ခု မဟုတ် တစ် ခု
နဲ့ ပါ တ် သက် နေ ရ မှ ကျေ နပ် တဲ့ ယောကျာ်း ၊
အိမ် အတွက် လုံ လောက် အောင် ရှာ ဖွေ မ ပေးနိုင်တဲ ယောကျာ်း
လူ တ ကာ နဲ့ မိန်း မ ကို ပေး စား နေ သော ယောကျာ်း၊
ယစ် လာ ရင် ရစ် တတ် သော ယောက်ျား၊
လ ခ ချ ရင် အိမ် ကို ပိုက် ဆံ ပါ မ လာ သော ယေကျာ်း
မိန်း မ ကို ဈေး ဘိုး ပေး ဘို့ တောင် တွန့် တိုေ သာ ယောကျာ်း၊
အ ပေါင်း အသင်း က လာ ခေါ် ရင် အိမ် မှာ ဘာ ဖြစ် ဖြစ် လိုက်သွား တတ် တဲ့ ယောကျာ်း၊
အမြဲ တမ်း ဒေါ သ ကြီး ပြီး ၀ိုင်း ဒိုင်း ကျဲ နေ တတ် သော ယောကျာ်း၊
တွေ နဲ့ လဲ တွေ့ နိုင် ပြန်ပါ တယ်။
တ ကယ် တော့ ကျား ကျား မ မ အိမ် ထောင် ပြု ချိန် က ဘ၀ လမ်း ခွဲ ပါဘဲ။
အချို့  တွေ အိမ် ထောင် မပြု ခင် မှာ ဘာ မှ မ ရှိ ပေ မယ့်  လိုက် ဖက် ညီ တော့
ကိုယ့် ဒူး ကိုယ် ချွန် ပြီး ကြီး ပွား ချမ်း သာ သွား တဲ့ စုံ တွဲ များ ရှိ သလို၊
အ ချို့ ကြ ပြန် တော့ လဲ ငွေ ကြေး မ ချမ်းး သာ ပေ မယ့် သာ ယာ ပျော် ရွှင် တဲ့
မိ သား စု ဘ ၀ မှာ အေး ချမ်း စွာ နေ နိုင် ကြ သူ လဲ ရှိ ပါတယ်။
အိမ် ထောင် မ ကျ ခင် က ငွေကြေး ချမ်း သာ တဲ့ အ သိုင်း အ ၀ိုင်း က
ပေါက် ဖွား လာ ကြ ပေ မယ့် အိမ် ထောင် ကျ မှ စီး ပွား ကျ ဆင်းသွားတဲ့
စုံ တွဲ တွေ လည်း ရှိ ပြန် ပါ တယ်။
ချမ်း သာ တယ် ဆို တဲ့ သူ ကို စီး ပွား ရေး ဈေး ကွက် တွက် ယူ ပေ မယ့်
ကိုယ့် လက် ထက် မှ ဘ ၀ ပျက်သူ တွေ လဲ ရှိ ပြန် ပါ တယ်။
ကျ နော် တို့ ငယ် ငယ် က သူ ငယ် ချင်း တစ် ယောက် ရဲ့ အ မေ ပြော ဘူး တာ
လေး ကို အမြဲ သ တိ ရ မိ ပါတယ်။
“အိမ် ထောင် ပြု တယ် ဆို တာ ထီ ထိုး သလို ဘဲ ။
ပေါက် ချင် မှ ပေါက် တာ” လို့ ဆို တာ လေး ကို ပါဘဲ။
သူ က သူ့ အဖြစ် အပျက် လေး ကို ကျ နော် တို့ ကို ပြော ပြ ပါ တယ်။
ကျ နော် တိုနဲ့ တွေ့ တဲ့ အချိန် မှာ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်း အဖေ က
အောင်မြင် တဲ့ ကျု ရှင် ဆ ရာ တစ် ယောက် ဖြစ် ပြိး စီး ပွား ရေး လဲ ကောင်း ပါတယ်။
ဒါ ပေ မယ့်  အ ရက် က မ သောက် ရ မ နေ နိုင် တဲ့ လူ စာရင်းထဲ မှာ ပါ နေ တာ က ဆိုး တာပါ။
အ ရက် သောက် ပေ မယ့် ရန် ဖြစ် တာ ဆူ တာ လုံး ၀ မ ရှိ။
အ ပြင် လဲ ထွက် မ သောက်။
အိမ် ထဲ မှာ ဘဲ မ နက် မိုး လင်း က ပြီး မ အိပ် မ ချင်း တစွတ်စွတ်သောက် တာပါ။
“ အန် တီ ငယ် ငယ် က ပေါ့။
အန် တီ့ ကို လူ နှစ် ယောက် က တစ် ပြိုင် တည်း ကြိုက် ကြ တာ လေ။
တ ကယ် လက် ထပ်မယ် ဆို တော့ သေ ချာ စဥ်း စား ပြီး ရွေး ရ တာပေါ့။
အန် တီ တို့ မိ ဘ တွေ က လဲ ဘု ရား နဲ့ တရား နဲ့ အေး ဆေး သ မား။
အန်တီ ကို ကြိုက် တဲ့ နှစ် ယောက် ထဲ မှာမင်း တို့ ဦး က ကျောင်း ဆ ရာ။
လူ ရိုး လူ အေး။
လူ ခြင်းေ တွ့ လို့ မှ စ ကား လေး လုံး ကွဲ အောင် မပြော
ဆေး လိပ် မ သောက် ကွမ်း မ စား။
နောက် တစ် ယောက် က တော့ ချမ်း သာ ကြွယ် ၀ တယ်။
ပျော် ပျော် နေ တယ်။
ဘာ မှ သိပ် ခေါင်း ထဲ မ တား။
အန် တီ ဆီ လာ ရင် တောင် အရ့က် နံ့ က လေး သင်း တဲ့ အ ခါ သင်း။
ဆေး လိပ်က လက် က မ ချ အ နံ့  မခံ နိုင် ဘူး ပြော လဲ မ ရ။
နောင် ရိုး နေ အောင် တ မင် သောက် တာ တောင် ပြော သေး တယ်။
အဲ တော့ အန် တီ က လဲ ရိုး ရိုး သား သား နေ တဲ့ မင်း တို့ ဦး ကိုဘဲ ရွေး လိုက် တာ ပေါ့၊
အ စ ကတော့ အေး ဆေး ပျော် ရွှင် ပါ ဘဲ။
နောက် သ မီး အ ကြီး လေး မွေး ပြီး လို့ သိပ် မ ကြာ ဘူး
အ လုပ် ကထွက် ပြီး ကျု ရှင် ပြ စား မယ် ဖြစ် လာ တယ်။
အဲ ဒီ မှာ ကျူ ရှင် ကလဲ အောင် မြင် ပါ တယ်။
ကျူ ရှင် အောင် မြင် တော့ အပေါင်း အသင်း များ လာ တော့ တာ ပေါ့။
အဲ ဒီ အချိန် က စ ပြီး အိမ် အ ပြန် အရက့် နံ့  လေး က ရက် ခြား ပါ လာရော။
ဟို လူ ဧည့် ခံ ဒီ လူ ဧည့် ခံ အ ကြောင်း ပြ တာ ပေါ့။
နောက် တော့ လည်း အခု မင်း တို့ မြင် တဲ့ အတိုင်း မ သောက် ရ မ နေ နိုင်
စာ ရင်း ထဲ ၀င် သွား တာပါ ဘဲ။
အန် တီ ငြင်း လိုက် တဲ့ တစ် ယောက် ကတော့
အိမ် ထောင် ကျ ပြီး သိပ် မ ကြာ ဘူး ။
အ ရက် ဆေး လိပ် အ ကုန် ဖြတ်။
အ လုပ် လုပ် လိုက် လှူ လိုက်နဲ့ ဘု ရား ဒကာ ကျောင်း ဒကာ ဖြစ်နေ လေ ရဲ့၊
အန် တီ့  ကံ ပေါ့ ကွယ်”
လို့ ခပ် ပြုံး ပြုံးလေး ပြော ပြ ပါတယ်။
ကျ နော် တို့  ဖြတ် သန်း ရာ ဘ ၀ လမ်း တစ် လျောက် မှာ
လမ်း ခွဲ မှာ အ ရွေး မှား ရင် တော့ ရ လာဒ် ကောင်း မှာ မ ဟုတ် တာတော့
အ သေ အ ချာ ပါ ဘဲ.။
ကဲ ကျ နော် တို့ ရော ဘ ၀ ရဲ့ ဒု တိယ လမ်းခွဲ မှာ အ ရွေး မှားခဲ့ သ လား
မှန် သလား ဆို တာ ကိုယ့် ဘ ၀ကို ယ် ပြန် ဆန်း စစ် ကြည့် ရ အောင် ဗျာ။
ကို ပေါက် လက် ဆောင် အ တွေး ပါး ပါး လေး
ဒီပိုစ့်လေးးဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျေနပ်မိပါတယ်။ရေးသားတင်ပြပေးတဲ့လေးပေါက်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်
လမ်းခွဲတိုင်း ရွေးချယ်မှုတွေ မှန်ကန်နေဖို့ရာ အသိတစ်ချက်ဝင်သွားပြီ
အ လက် ဆင်း ရေ ဒီ ပိုစ် လေး ခေါင်း ထဲ ရောက် နေ တာ ကြာ ပြီ
အခု မှ တိုက် ဆိုင် တာေ လး တစ် ခု ရှိ လို့ ချ ရေး ဖြစ် တယ်
ဒီ ပို့(စ) ကို အတော်သဘောကျပါသည်။
ယူတတ်ရင် ရနိုင်သော အိမ်ထောင်ရေး အနုပညာ ပါတကားးး
၁။ Marriage ဆိုတာကတော့ Legal relationship between husband and wife လို့ဆိုပါတယ်။ ခင်ပွန်းနဲ့ ဇနီးအကြား တရားဥပဒေလမ်းကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်နှီးနွယ်လာတဲ့ ဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ Union between two person လို့လည်းယူပါတယ်။ မြန်မာဘာသာစကားမှာကတော့ အိမ်ထောင် ဆိုတဲ့ စကားကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း အိမ်ထောင်ကျတယ်လို့ဆိုကြပြန်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဆိုတဲ့ အဓိပယ်ကိုလည်း အမျိုးမျိုးဖွင့်ကြတယ်။ အချို့က ထောင်နဲ့တူတယ် ပြန်ထွက်မရတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း အိမ်ယာသစ်ထူထောင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပာယ်မျိုးယူတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအဓိပာယ်က မဟုတ်လောက်ဘူး။ ကျတယ်လို့ သုံးရင်တော့ ထောင်နဲ့ တူလို့ပဲဖြစ်မယ်။
၂။ တစ်ချို့ကလည်း မယားနေစ ကြောင်သေမတို့၊လင်နေစ ဆင်သေမ တို့ အစရှိသည်ဖြင့်ပြောတာရှိတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ တစ်ဦးကို တစ်ဦး စတင်လွှမ်းမိုးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လင်ရယ်မယားရယ်ဖြစ်လာရင် မတူညီတဲ့ မိသားစု Culture တွေညှိကြတယ်။ လင်ကလည်း လင်အလျှောက် လွှမ်းမိုးလိုတယ်။ မယားကလည်း မယားအလျှောက် လင်အပေါ် သြဇာရှိချင်တယ်။ တစ်ချို့ကလည်း အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ အရင်းအနှီးရှာဖို့၊ လုပ်ငန်းတွေ ပူးပေါင်းဖို့လောက်ပဲ ယူဆတယ်။ လုပ်ငန်းခြင်းဆက်စပ်သူတွေကို ပေးစားကြတယ်။ အဆင်မပြေရင် ကွဲပြဲကျတာပဲ။ တစ်ချို့ကလည်း နောင်လာမဲ့ အလားအလာတွေကို တွက်ဆပြီး ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ တွက်ဆ မှုတွေက လွဲတာများပါတယ်။ လူတွေဆိုတာက ပြောင်းလဲနေသူတွေပါ။
၃။ တကယ်တော့ မင်္ဂလာဆောင်ခြင်း လို့ ခေါ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ လူသားတိုင်းဟာ အရာရာ ပြည့်စုံနေသူမျိုးမရှိပါဘူး။ အမျိုးသားကလည်း အမျိုးသားအလျှောက် အားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်။ အမျိုးသမီးကလည်း အမျိုးသမီးအလျှောက် အားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်။ အားနည်းချက်တွေရှိသူတွေ ပေါင်းဖက်ကြပြီး ပြည့်စုံသူများဖြစ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် မဂ်လာပြုခြင်းဟာ အလွန်မြင့်မြတ်သော အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ လူသားတွေကို နောက်အဆင့်တစ်ဆင့်ကို မြှင့်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် မင်္ဂလာပြုခြင်းဟာ ညစ်ညမ်းခြင်း မဟုတ်ဘူး။ ရှက်ရွံ့စရာမဟုတ်ဘူး။ လူသားတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားကြရမယ်။ လူသားမျိုးနွယ်တွေကို တိုးပွားအောင် လုပ်ဆောင်နေရမယ်။
၄။ သို့သော်လည်း လူသားတွေမှာ အရွယ်ဆိုတာရှိတယ်။ အမျိုးသားတွေထက်၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ အရေးကြီးတယ်။ အရွယ်ရှိတုန်း မင်္ဂလာပြုကြရမယ်။ ဒါမှ ဥာဏ်ရည်ပြည့်မီတဲ့ သားသမီးများရရှိနိုင်မယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဘ၀ မှာ မင်္ဂလာ မပြုခဲ့ကြသူတွေလည်း စိတ်ပျက်အားငယ်ရန်မလိုပါဘူး။ မိမိမိသားစုနဲ့ အများအကျိုးလုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ အချိန်အများကြီးပေးနိုင်လာကြတယ်။ သေချာတာကတော့ ငွေကြေးတွေ၊ အလားအလာတွေ၊ ကြော်ကျားမှုတွေကို အခြေခံတဲ့ မင်္ဂလာများဟာ အမင်္ဂလာများနဲ့ ပဲ အဆုံးသတ်သွားလေ့ရှိတယ်။ မင်္ဂလာရဲ့ သဘောဟာ ရှည်လျှားခြင်းသဘောရှိတယ်။ မပြောင်းလဲခြင်းသဘောရှိတယ်။ ရေရှည်ခံသော မင်္ဂလာများရဲ့ အခြေခံ ဟာ မေတ္တာတရားသာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
By Asia Masters Hotel-Managment
ဒီေ လာက်သိ လို့  အ ပျို ကြီး ဖြစ်နေ တာနေ မှာ အေ့
အင်္ဂလိပ်လို.. မဲရေ့ဂ်ျမှာက.. တော်တော်ပြည့်စုံတဲ့အဓိပ္ပါယ်ရှိနေတယ်လို့ထင်မိတယ်..
အပြန်အလှန်ချုပ်ကိုင်ခြင်းထက်.. သဘောတူခွင့်ပြုချက်ယူတဲ့.. စာချုပ်သဘောလည်းပါပြန်ပါတယ်..။
သေချာတာကတော့.. ၂ဦး၂ဖက်က.. အပြန်အလှန်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့်ရပြီး.. ပိုင်ဆိုင်သွားကြတာတော့ မဟုတ်ပေဘူး..
သဘောမတူမျှရင်.. ဒီဗိုစ့်လုပ်ပြီး.. တာဝန်ယူခြင်းတွေနဲ့အတူတူ.. ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်လည်းအပြည့်ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်..။
လက် ထပ် တယ် ဆို တာ မိသား စု ကြီး နှစ် ခု ပေါင်း တာ အမှန် ပါဘဲ
လက် ထပ် တာ ချုပ် နောင် တာ မ ဟုတ် ဘူး ကိုယ် ပိုင် လွတ် လပ် ခွင့်  ဆုံးဖြတ် ခွင့်  ရလာ တာ အမှန် ပါဘဲ
တစ်ခု တော့ ရှိ တာ ပေါ့ အိမ် ခွဲ မ ဆင်းဘဲ မိ ဘ အိပ် ကပ် နေ ရ င် တော့ တစ် မျိုး ပေါ့ဗျာ
ကိုပေါက်ရေးတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဇတ်လမ်းလေးဖတ်ရတော့…ကြည့်ဖူးခဲ့ပြီး ဒီနေ့ထိစွဲမှတ်နေသေးတဲ့
ကိုမိုက်စ်ေ ရ အိမ် ထောင် ရေး နယ် ပယ် ကျယ် လွန်း ပါ တယ် ဗျာ
“နှင်းဆီနီအိပ်မက်” ကားကလည်း အိမ်ထောင်ဖက်အရွေးမှားတဲ့အကြောင်းလေးရိုက်ထားတာဗျ…
အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ ထီထိုးသလိုပဲဆိုလို့ ၀င်းဦးရုပ်ရှင်ထဲမှာ ခင်လေးဆွေပြောတာလေး သွားသတိရမိတယ်။ ထီထိုးပြီဆိုကတည်းက သိန်းဆုပြီးကိုမှန်းတာပဲ။ (ခုခေတ်တော့ သိန်း၁၅၀၀ ပေ့ါ)
မရတော့လည်း ကျပ် ၅၀၀ ဆုနဲ့လည်း ကျေနပ်လိုက်ရတာပဲဆိုတာလေ။
မ မရေ ထီ မ ထိုး တဲ့ သူ တွေ လဲ လော က ကြီး မှာ ရှိ တယ်ေ နာ်
ိရွာ ထဲ က အပျို ကြီးေ တွ ထီ မ ထိုးတဲ့ အ ကြောင်း မ မှတ် မိ ပါ စေ နဲ့
မွေးဖွါးရာနေ သေဆုံးချိန်ချိန်အထိ လျှောက်လှမ်းရမယ့်
လူ့ဘ၀လမ်းခရီး မှာ ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုး လမ်းကွေ့များထဲက
လမ်းခွဲလေး ၂ ခု ကို ပြောပြထားတာပေါ့နော်…
ပထမလမ်းခွဲ အထက်တန်း (၁၀တန်း)အောင်ပြီး ကိုယ် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ် မေဂျာရပ်ကို ကျေနပ်လားဆိုတော့ ငါးနှစ်တာ မြို့ပြနဲ့ အလှမ်းဝေး မှော်ဘီ နဲ့ တိုက်ကြီးကြားက နည်းပညာကျောင်းလေးမှာ ပညာသင်ကြားပြီး ရခဲ့တဲ့ BE ဘွဲ့နဲ့ ယခု Carrier Life
ထပ်တူကျကျေနပ်လားဆိုတော့ ….အင်း… ကိုယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ ကိုယ်ပဲမို့ နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာလို့ပဲ ဖြေတတ်ခဲ့ပါပြီ …
ဒုတိယ လမ်းခွဲကတော့ မကြုံသေးပါဘူး…ထီသည်စကား ကိုပဲ နားထဲကြားမိတယ်..
ဗမာစကားပုံထဲကလို လင်စံရွေး လင်ခွေးနဲ့လည်း မညားလိုပါတယ်…
မသေမချာ မရေရာတာဒွေအတွက် စိတ်ပူပန်စိုးရိမ်မနေတတ်ပေမယ့်
နှုတ်ခမ်းပဲ့ချင်း မီးမမှုတ်နဲ့လို့တော့ မွေးသမိခင် ကျေးဇူးရှင်ကြီးက အမြဲ ပြောတတ်တယ်…
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတော့ ချောက်ထဲကို ခုန်ချဖို့
ဘယ်သူကများ ဒုက္ခကို ကျောပိုးလို့
အချစ် = ဓါးသွားပေါ်က ပျားရည်စက်လို ချို သ ယောင် ယောင် ထင် ရ တဲ့
ဆေး ပေး ပြီး မီး ပြန် ယူ ရ မယ့် သူ လေး က
ကိုယ့်လက်ကိုရဲရဲတွဲထားနော် အချစ်လေး လာ လို့ ခေါ်လာမယ့်အချိန်ကို
စောင့် ရင်း …
ဘိုး ဘွား ရိပ်သာ စာ ရင်း ပေး ရ မယ့် နေ့ ရောက် တော့ မယ် ထင် ပါ ဒယ် ….ေိခိ
မဆုံးနိုင်သေးတဲ့ သံသယာခရီးသွားဖို့ ကိုယ့်နောက်ပါ့မယ့် ကုသိုလ်အထုပ်လေးပဲ ရှာဖွေ စုဆောင်းတာ ကောင်းမယ် ထင်ပါဒယ် … အဟိ အဟိ
ပု လဲြုဖူ ရေ အား မ လျော့ လိုက် ပါ နဲ့ လမ်း ခွဲ မှာ လမ်း မှန် ကိုေ ရွး မိ မှာ သေ ချာ တယ် ထင် ပါ တယ်ေ နာ်
မသေချာ မရေ ရာ တာ ဒွေ များ တဲ့ လောက ထဲ …
အချိန် တန် အိပ် ပြန် ချိန် ဒွေ နှုတ် ဆက် လမ်း ခွဲ တိုင်း …
အချိန် တန် အိမ် ပြန် ချိန် ဒွေ နှုတ် ဆက် လမ်း ခွဲ တိုင်း …
” အချစ်လေး လာ လို့ ခေါ်လာမယ့်အချိန်ကို စောင့် ရင်း ”
ဟင် ၊ ဘာလို့ သူများရဲ့ အရွေးခံ ဘဝ လုပ်နေရသဒုံး ။
ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ခေါင်းခေါက် ရွေးပစ်လိုက်စမ်းပါ ။
မှားတော့လဲ ၊ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရွေးထားတာမို့ ကိုယ်ခံပျော်တာပေါ့ ။
ရွေးချယ်မှု မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ် ထင်တာပဲဗျာ။ အခုထိ နောင်တရစရာမရှိလို့
ဒုတိယ လမ်းခွဲ အတွက်ကတော့
မောင် မာဃ ရေ မင်းတို့  လို ဒု တိယ လမ်း ခွဲ နီး နေ သူ တွေ အ တွက် ပါ
ကိုပေါက် ကတော့ ကိုပေါက် ပါပဲ
အတွေး အရေးလေး သဘောကျမိရဲ့
ခေါင်းစဉ်ပဲ တွေ့နေတုန်းက ကိုပေါက် ရဲ့ လက်ရာ လမ်းခွဲလေးနှစ်ခုပါတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေထင်နေတာ
လက်ထဲက ထီ လက်မှတ်က ပေါက်နေမှန်းသိရတယ်
ကိုပေါက် ပြောတဲ့ …………….
ဆိုတာတွေ နဲ့ လုံးဝ မတိုက်ဆိုင်သူမို့
ကို နို မိန်း မ က ရော ကို နို ကို ပြန်ပြီးအား ဘွား ပေး မ ပေး သိ ချင် မိ ပါ သည်
အိမ်ထောင်ပြုတာကို လမ်းခွဲ … လို့ တင်စားတာလေးတော့ တကယ်သဘောကျမိတယ်…
လူများစုအဖို့ အိမ်ထောင်ပြုတာ တကယ်ပဲ ဘ၀ခရီးမှာ သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းက လမ်းခွဲထွက်လိုက်ရတာပါ…
ဒါကြောင့် လမ်းကြောင်းအသစ် ရှု့ခင်းအသစ် စိမ်ခေါ်မှု့အသစ်တွေနဲ့ တွေ့ရမှာပါ…
လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို မြေပုံစာအုပ်ထဲကြည့်ရတာမျိုးနဲ့ ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တာမျိုးက
မှန် တယ် ကို ပါ တကယ့် ဘ၀ ကို ခရီး သွားတဲ့ အခါ မြေ ပုံ မ ပါ ကြ ပါ။